မှ Wow သို့ သူကြီး Cc: ရွာသူရွာသားအားလုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မှ Wow သို့ သူကြီး Cc: ရွာသူရွာသားအားလုံး
မှ Wow သို့ သူကြီး Cc: ရွာသူရွာသားအားလုံး
Posted by Wow on Feb 4, 2012 in Business & Economics | 11 comments
Cc: ရွာသူရွာသားအားလုံး မှ Wow သို့သူကြီး
၅၀၀၀ ကျပ်တန်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူကြီးမှ အလွန်အကုန်အကျများသော ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်ရန် အလွန်အကုန်အကျများသဖြင့် အစိုးရမှသာ လုပ်နိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် တကယ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြင့် (http://myanmargazette.net/92279/economic-news-international-news-news-industry-people-in-the-news-us-news-news) ပို့စ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း မန့်ထားပါသည်။
အလားတူပင် အခြား ကျပ်၅၀၀၀ တန်ဖုံးနှင့် ပတ်သက်သော ပို့စ်များတွင်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သို့ပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် ကိစ္စက လတ်တလော အလွန်အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေသည့်အပြင်၊ အနှီငါးထောင်တန်ဖုံးမှာ ကျမတို့ကဲ့သို့ လူလတ်တန်းစား၊ အခြေခံလူတန်းစားများ၏ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နေပါသဖြင့် ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအရနားမလည်သည်များကိုတော့ အချိန်ပေး အလုပ်ရှုပ်ခံ ရှင်းပြမည် ဆိုပါက ကျေးဇူးအထူးတင်ပါမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
ကျမသည် အလုပ်တာဝန်ဖြင့် 17-Sept-07 တွင် Nairobi, Kenya, Africa သို့သွားရောက်ခဲ့ရာ မြန်မာမှ TG306 ဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး BKK Transit တွင် KQ231 (Kenya Airway) ဖြင့် ထိုည ၁၁နာရီတွင် ထွက်ခွာရန်ဖြစ်သော်လည်း ကင်ညာအဲဝေးမှ လေယာဉ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် နောက်တစ်နေ့ 18-Sep-07 နံက်မှ ကင်ညာနိုင်ငံသို့ ၉နာရီခရီး လေယာဉ်စီး၍ ထွက်ခွာခဲ့ရပါသည်။ လေကြောင်းလိုင်း၏ ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ခရီးသည်များ ကြန့်ကြာခဲ့ရသည့်အတွက် လေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည်အားလုံးကို ဟော်တယ် တစ်ညတာစီစဉ်ပေးပြီး Breakfast ပါ စားပြီးမှ ကျမတို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ခရီးစဉ် Delay ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကင်ညာလေကြောင်းမှ ခရီးသည်အားလုံးကို US$100 ကို Refend ပြန်ပေးငွေအဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ကန်ပနီစရိတ်ဖြင့် ခရီးထွက်ခဲ့ရသော ကျမကို အနှီ ၁၀၀ ကို ကန်ပနီမှသုံးခွင့်ပြုသဖြင့် ကင်ညာအရောက်သူတို့ဆီက နတ်ခုမ ကုန်တိုက်မှာ ဟန်းဆက်၊ ဆင်းမ်ကတ်၊ ငွေကတ်(သူတို့ငွေ ၁၀၀၀ဖိုး) ကိုရောက်ရောက်ခြင်းဝယ်လိုက်ရာ US$60 တိတိကျသည်။ 27-Sept-2007 တွင်ကျမ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြီး ကျမထံတွင်ယခုတိုင် Safaricom Wallet ရှိသေးသည်။ သူရို့ဆီမှာ ကန်ပနီက ဒလိုင်ဘာအစ အိမ်အကူအဆုံး ကိုယ်နဲ့တန်းတူ ဖုန်းကလေး တွေကိုင်ထားကြတာတော့ စာမဖွဲ့တော့ပါဘူး။
ပြောချင်တာကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အာဖရိကမှာတောင် အဲဒီ့ Safaricom Mobil ကို ကျမ(ဖြစ်ရပ်ကတော့အမှန်ပါ ဒါပေမဲ့ ကန်တော့ပါရဲ့) ရေအိမ်ထဲမှာ ပြောလို့လိုင်းကောင်း၊ ကြည်လင် ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ အာဖရိကအစိုးရက မြန်မာအစိုးရထက် ချမ်းသာနေတာလား???
အသိအမြင်နဲပါးသူများအတွက် တတ်သိနားလည်ပညာရှင်များ ရှင်းလင်းကြပါကုန်….
မဟာမေဒင်(မွတ်စလင်)ဘာသာဝင်အဖြစ်မှ ဗုဒ္ဒဘာသာသို့ ပြောင်းလဲသက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့သော ဆရာတော်ဦးဇောတိက၏ “လွတ်လပ်သောစိတ်” စာအုပ်တွင် “စဉ်းစားခွင့်မပေးတာ၊ သံသယဖြစ်ခွင့်မပေးတာ၊ ကြောက်အောင်လုပ်တာ အသိဥာဏ်ကိုသတ်လိုက်တာပဲ၊ လူသားရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ၊ လူသားကို လူသားအဆင့်ကနေ ကျသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။” “ဗုဒ္ဒဘာသာတရားဟာ စကတည်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ် အမှန်တရားကို ရှာဖို့အားပေးတယ်။ မျက်ကန်းယုံကြည်မှုကို အားမပေးဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက ငါဘုရား ဟောတာယုံရမယ်။ မယုံရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့မပြောဘူး။(ကာလာမသုတ်)”
လူဆိုတော့ Complain တက်ချင်သည်။ လူကြီးသူမက မကောင်းဘူးပြောလဲ ဘာကြောင့်မကောင်းလဲ သိချင်သည်။
ကျမရဲ့ “မျောက်လိုတွေး၍လူလိုရေးခြင်း” Post (http://myanmargazette.net/83572/creative-writing) မှာ ကျမ၏မှားနေသောအမြင်ကို သူကြီးကအမှန်ကို ပြောပြခဲ့ဘူးသည်။
စွယ်တော်ကို.. တရုတ်ပြည်နဲ့.. မြန်မာပြည်ချစ်ကြည်ရေးနဲ့.. ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်ဖို့.. သံတမန်ခင်းအနေနဲ့.. ထုတ်သုံးလိုက်တာပါ..။
အဲဒီအကျိုးအမြတ်က.. ၂ဖက်လုံးသော အစိုးရတွေအတွက်တော်တော်ကြီးပါတယ်..။
အဲဒီတော့ သူကြီးစထားတဲ့ကိစ္စ သူကြီးရှင်းပေရော့:D
အပြောအဆိုမတတ်သူမို့ အမှားပါလျှင် ပညာရှင်များမှခွေးလွှတ် …အဲလေ ခွင့်လွှတ်ကြပါချင့်….
မေးခွန်းက သဂျီးကို တည်ထားလို့သများတို့ဦးနှောက်စားစရာလိုတော့ဘူး
ဆက်သွယ်ရေးက လုပ်ပေးရမဲ့အလုပ်ကို ရွှေပြည်တံခွန်က ကြားထဲက ၀င်ညှော်တာလားလို့ 
ရွှေပြည်တံခွန်က လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် အချိန်တော်တော်စောင့်ရဦးမယ်ထင်ပါတယ်..
မစောင့်နိုင်ရင် ဆက်သွယ်ရေးကကောင်တွေကို ၀ိုင်းကြပ်ဖို့ ပဲလို တယ်
အခုဖုန်းတွေက ဟိုကောင်တွေအဖွဲ့ငတေတို့ဖန်ထားတဲ့ဂွင်တွေ
ဒီကောင်တွေကို ကျုပ်တို့ ချီးမပေါက်သရွေ့ပြည်သူတွေကို ရသလောက်ပါးပါးလှီးသွားကြဦးမှာပဲ
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့လုပ်ပေးလို့ ရလျက်နဲ့ဂုတ်သွေးစုတ်ချင်နေတဲ့ကောင်တွေ..
အဲလောက်တောင် အ၀ှာဖြစ်ရင် အ၀ှာပါ စုတ်သွားကြကွာ (ကြံချောင်း၊ရေခဲမုန့်စည်)
ရွှေပြည်တံခွန်သာ အ၀ှာထမဖြစ်ရင် ကျုပ်တို့ဒီလိုပဲ ရရာဈေးနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့လူတွေ ပေးဝယ်နေကြရဦးမှာပဲ
ငါးထောင်တန်ရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ..အိပ်ပျော်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ .ကျုပ်တို့ ကို လှုပ်နှိုးပေးတဲ့ ရွှေပြည်တံခွန်ကို
နေရင်းထိုင်ရင်း သူကြီးကိုခိုင်ရေ ရှင်းစရာပေါ်လာပြန်ပါပီ။ရှင်းပြပေးလိုက်ပါဗျာ။
သဂျီးကို အချွန်နဲ့မပြီပဲ။ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါ သူဂျီးရယ်။ တော်ကြာ နားလည်မှုလွဲနေပါဦးမယ်။
အဘဖောပို့စ်မှာ မန့်ထားတာတွေ.. ကူးတင်လိုက်ပါတယ်..။
ကြားထဲမလည်း…ကုမ်ပဏီတခုက… မြှောက်ပေးတိုင်း. အင်ဖရာအခိုင်မရှိပဲ.. ဖုံးတလုံး၅ထောင်နဲ့ရဖို့.. ၀ိုင်းတွန်းနေကြလေရဲ့…
လူထုထဲက..လူအနည်းစုလို့ထင်ပါတယ်..။ ကျန်လူ သန်း၄၀ကျော်လောက်က.. သိတောင်သိမှာမဟုတ်..။
ဒါပေမဲ့..မီဒီယာအားရှိတော့.. ဒီလိုဝိုင်းတွန်းနေတာနဲ့.. မရှိတဲ့..မလောက်တဲ့.. ငွေအရင်းအမြစ်ကို.. ပညာရေး..ကျမ်းမာရေးထဲမသုံးနိုင်ပဲ.. ဖုံးတလိုင်း၅ထောင်နဲ့ရဖို့.. သွားမြုတ်ထည့်လိုက်ရဦးမယ်..
ဒီရွာထဲရှိတာဘဲ ဘာတဲ့ မြွေတွင်းထဲက မျက်လုံးအလင်းရောင်တွေကို
ကိုယ်က လင်ယူသားမွေး ကိလေသာထလို့ဝမှ
ဟဲ့တာ ပြီးတော့ပျီးတာဘဲ ဆိုပြီးတရားလာမချနဲ့
ပညာရေးလဲမလိုခြင်ဘူး ( ရုံးစာရေးလခ ရှမ်းပြည်မှာ တစ်ပတ်နဲ့ရဒယ် )
ကျမ္မာရေးလဲ ဂရုစိုက်ဘူး ( ကိုးပါးဆေးရှိတယ် )
ဒီပို့စ် ဖတ်ပီး တော့ မန့်ပေးပါအုံး
သူကြီးရေ .. sim card အလကားတောင် ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး proposal တင်ထားသူတောင် ရှိပါတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တော့ ရွှေပြည်တံခွန်ကို ယုံကြည်နေသေးတယ် ။ ယှဉ်ပြိုင်သူတွေ များတဲ့ အကြားမှာ နှာတစ်ဖျား အသာယူ ဘို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်တယ် ။ နော်ဝေးက ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး တယ်လီကွန်း ကုမ္မဏီကလည်း ချည်းကပ်နေလေရဲ့။ ဒီကုမ္မဏီရိုက်စားလုပ်မှာ လိမ်သွားမှာ စိုးရင် အာမခံတင်ထားခိုင်းလိုက်လေ။
လူတစ်သန်း X (ဖုံး ဘိုး ၅၀၀၀ ၊ ဖုံးခေါ်ဆိုခ ကဒ် ၁၀၀၀၀ = ၁၅၀၀၀ ကျပ်) သန်း ၁၅၀၀၀ = ဒေါ်လှ ၂၀ သန် ငွေသား အာမခံတင်ထား ။ ပြီးလုပ် ။ မရရင် ဒီငွေတွေ ၀ယ်ထားသူတွေကို ပြန်အမ်း ။ သူ့ ဖုန်းနဲ့ မှ လို့ လုပ်လာရင်တော့ တစ်မျိုးပြန်တွေးကောင်း တွေးရပေမဲ့ ၊ အဲ့ဒါတွေ အတွက်ပါ ပေါင်း ပြီး အာမခံတင်ထားပေါ့ဗျာ။
ဘဖောရေ .. ဖုန်းဘက်ကို လမ်းလွဲသွားတာတော့ ၀မ်းနည်းပါတယ် ။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ အလွယ်တစ်ကူ လစာတိုးပေးတာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းအနေနဲ့ မမြင်ပါဘူး ။ လစာ တိုးလိုက်တာနဲ့ ဈေးနုန်းတွေ လိုက်တက်လာဦးမှာမို့ ထူးမခြားနားပါ ။
၀န်ထမ်းတွေ ဖြုတ်ပြစ်တာလည်း မှန်ကန်တဲ့ လမ်းလို့တော့ မယူဆပေမဲ့ လုပ်သင့်ရင် တော့ လုပ်ရမှာပါ ။ အဓီက ကတော့ နိုင်ငံ ၀င်ငွေ တိုးအောင် ရှာဖို့ပါ ။
နိုင်ငံ ၀င်ငွေ တိုးလာပြီးရင် နိုင်လာမှ သက်ဆိုင်ရာဈေးတွေ ကျအောင်ချရမယ်လို့ထင်မိပါတယ် ။ ၀င်ငွေတိုးအောင် ရှာဖို့ က Human Resource က အရေးကြီးနေသေးတယ်လေ ။ ဖြုတ်ပစ်ဖို့တော့ လောလော ဆယ် မထောက်ခံပါဘူး ။
နံပါတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်… လိုင်းဝယ်တာလား..။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖုံးနံပါတ်အသစ်နဲ့.. စံနစ်သစ်နဲ့.. ဖုံးကုမ်ပဏီကြိးဖြစ်ချင်တာလား..။
ပြည်သူပိုင် အင်ဖရာစရပ်ချာကို ဖြတ်သုံးပြီး.. ကြားကနှမ်းဖြူးစားချင်တာလား..
ဒါပေမဲ့.. အစိုးရတရပ်..တိုင်းပြည်တခုမှာ.. အခြေခံစည်းကမ်းတော့ရှိတယ်..။
ဆက်သွယ်ရေးအင်ဖရာစရပ်ချာနဲ့..စာတိုက်ကို.. ပုဂ္ဂလိကလက်ထဲ.. လွှဲမအပ်ရဘူး…။ နိုင်ငံသားတဦးချင်းဆီရဲ့.. ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးကို အစိုးရကပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တာမို့ပါ..။
ယူအက်စ်လိုနိုင်ငံမှာ… ကုမ်ကဏီတွေအင်မတန်ရင့်ကျက်မှအပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့.. အစိုးရက..ချုပ်ကိုင်ထားရတာပါပဲ..။ စီမီဂါးဗားမန့်..အစိုးရတ၀က်တွေပေါ့…။
ကြီးလွန်းပြီး..ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်လာလို့.. အစိုးရက..အင်တိုင်ထရပ်ဥပဒေနဲ့..အစိတ်စိတ်ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ရတာလည်း ရှိဖူးတယ်..။
မြန်မာပြည်လိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာ… ဆက်သွယ်ရေးအင်ဖရပ်စရပ်ချာကို.. (ဘာမှခိုင်ခိုင်မာမာမလုပ်ထားတာတောင်.).. ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်.. ဘီလီယန်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြုတ်နှံခဲ့ပြီးလောက်ပါပြီ…။
ထပ်ထည့်ဖို့လည်း.. နောက်.. အနှစ်၎-၅၀အတွင်း.. ဘီလီယန်ရာချီကုန်ရဦးမှာပါ..။
ဒါကို.. ပုဂ္ဂလိကဆီက.. ဘယ်လိုအာမခံတောင်းရမလည်းတော့မသိ…။
ကို htoosan ရေ
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၉ ) မှာ
အဘ အမြင်ကို ပြန်ဖြေထားပါတယ်ကွယ် ။
လူကြိုက်တော့ နဲမှာ သေချာတယ် ။
သူကြီးမင်း Kai လဲ ဝင်အားပေးပါအုန်း ။
သိတတ်လို့မဟုတ်.. ဒါပေမဲ့.. မှန်းလို့ရသလောက်ပေါ့..။မှားတာတွေ့ရင် ပြင်ပေးပါ..။
ယူအက်စ်မှာ တာဝါတခုရဲ့ကနဦးကုန်ကျစရိပ်ကတင်.. တခု… ဒေါ်လာ၁သိန်းအသာလေးရှိနိုင်ပါတယ်..။
ထိန်းသိမ်းတာနဲ့.. ငှားရမ်းခတွေလည်း.. တနှစ် ဒေါ်လာသောင်းဂဏန်းအသာလေးပါပဲ..။
အဲဒီတော့..အပေါ်က.. ၂၄၂၁၃ ဆဲလ်စိုက်(တာဝါ)တွေကို.. ဒေါ်လာ ၁သိန်းနဲ့မြှောက်ရင်.. ဘာမှမလုပ်သေးပဲ.. ကုန်ကျသွားတဲ့.. အင်ဖရာစရပ်ချာရဲ့.. အစိတ်အပိုင်းငွေကြေးတခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်..။ ဒါတောင်.. ၂၀၀၈ခုနှစ်စာရင်းနော…။
တနိုင်ငံလုံးဆွဲထားတဲ့.. ကြိုးဖုန်း(လန်းဒ်လိုင်း) အင်ဖရာတွေမပါသေးပါဘူး..။
ကမ္ဘာဆက်သွယ်ရေးအကောင်းဆုံး နိုင်ငံတခုနဲ့နှိုင်းပြရတာက.. ဖုန်းလိုင်းကြေးဖိုး.. အတွက်ဈေးကွက်အခြေအနေ သိသာဖို့ရယ်ပါ..။
တိုင်းပြည်တခုရဲ့.. ဆက်သွယ်ေ၇းအင်ဖရာစရပ်ချာဟာ.. ဒေါ်လာဘီလီယန်တွေအသာလေးထပ်သွားနိုင်ပါတယ်..။
The Regional Bell Operating Companies (RBOC) are the result of United States v. AT&T, the U.S. Department of Justice antitrust suit against the former American Telephone & Telegraph Company (later known as AT&T Corp.). On January 8, 1982, AT&T Corp. settled the suit and agreed to dives f”) its local exchange service operating companies. Effective January 1, 1984, AT&T Corp.’s local operations were split into seven independent Regional Bell Operating Companies known as “Baby Bells.” RBOCs were originally known as Regional Holding Companies (RHCs).
ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံး update သတင်းလေးပါ…..
တန်ဖိုးနည်း GSM လေးသန်းအတွက် ငွေကျပ်ဘီလီယံ ၅၀၀ အသုံးပြုခဲ့
´´လက်ရှိသုံးနေတဲ့ GSM နှစ်သန်းနီးပါးအတွက် တာဝါတိုင် ၉၀၀ ကျော် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ စိုက်ထူခဲ့ပါတယ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း သန်း ၃၀ စီမံက်ိန်းရဲ့ ပထမနှစ် GSM လေးသန်းစီမံကိန်းအတွက် တာဝါတိုင် ၁၄၀၀ ကျော်နဲ့ တခြားအခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အများကြီိးတိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်´´ဟု
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း GSM သန်း ၃၀ ချထားပေမည့်စီမံကိန်းတွင် ပထမနှစ် လေးသန်း၊ ဒုတိယနှစ် ငါးသန်း၊ တတိယနှစ် ခြောက်သန်း၊ စတုတ္ထနှစ်
ခုနှစ်သန်းနှင့် ပဉ္စမနှစ်တွင် လိုင်းအရေအတွက် ရှစ်သန်းချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုင်းအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားမည်ဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။
´´GSM တွေပေါ်ကာစက ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀ အဲဒီကနေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်းငါးသောင်းအထိ လျှော့ချပေးခဲ့တယ်၊ ၁၅ သိန်းငါးသောင်းကနေ ကျပ် ငါးသိန်းအထိ ထပ်ဆင့်လျှော့ချပေးခဲ့တဲ့အတွက် အခု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနည်းGSM ကျပ်နှစ်သိန်းနဲ့
သုံးသိန်းအကြားဖုန်းကိုလည်း အနိမ့်ဆုံးကျပ်နှစ်သိန်းနဲ့ ရောင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျပ် ၅၀၀၀တန်ဖုန်းမျှော်နေတဲ့
ပြည်သူတွေကို နှစ်သိမ့်ရာကျမှာပါ´´ဟု လက်ရှိကာလတွင်ရောင်းချပေးမည့်ကျပ် နှစ်သိန်းနှင့် သုံသိန်းအကြားဖုန်းအား ကျပ်နှစ်သိန်းဖြင့်
ရောင်းချပေးစေလိုသူ ကိုဇော်အောင်က ပြောသည်။
ဖြိုးဝေ( the street view )
သစ်ထူးလွင် 2/05/2012 11:12:00 AM
ကြိုးစားပန်းစား ကျွဲပါးစောင်းတီး ပြရှာသော သူကြီးကိုအားနာမိပေမဲ့ (ဟယ် ငါတော့ ကျွဲဖြစ်ပီ )
ကျုပ် သဂျီးဘက်ကအပြည့်အ၀ ရပ်တည်တယ်….
(အဲ့ …မမှားဘူးဆိုတာထက် မမှားသေးဘူး ပြောရင် ပို မျှတမယ်ဗျ…
အနှီ ၅ဂျိန်းဖုန်း ကန်ပနီ လီမိတက် က ဘစ်ဇနက် ပလဲင်န် ချပြတယ်..
တက္ကနီကယ်လ် ပလဲင်န် ပါမလာဘူး …. စကတ်ဂျူးလ်ပါမလာဘူး …..
ဒုတိယတချက်….ကိုတေးရှင်းတင်ထားတာ ခန်ပနီ ၁၀၀ကျော်ဆို …
၁၀၀ပဲထားပါ …၅ဂျိန်း ခန်ပနီဖယ်လိုက် ကျန် ၉၉ခုက …
၁။ ကျနော်တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းပါ့မယ်…
၂။ သည်လို သည်လိုလေး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုက်ရင် ဘယ်အပိုင်းတွေမှာ ဘယ်လို
(၅ဂျိန်းကန်ပနီက ဖိတ်ခေါ်တယ် ပြောထားတာကိုး ..)
၃။ ဒါကတော့ လုံးဝ ဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိပါခင်ဗျား …
(ဒါမျိုး …အချက်အလက် ခိုင်မာစွာနဲ့ …ထုတ်ဖော်ပြောဆို သတင်းထုတ်ပြန်တာ..)
ကျုပ် သိသလောက် …အဲ့သည့် ၃ခုလုံး ဘယ်သူမှ မလုပ်ဘူးခင်ဗျ…
အဲ့ဒါကိုက ထူးဆန်းနေတာ …..။
က) ၅ဂျိန်း သည် ကောင်းလွန်းနေပြီး ..အနှီ ၉၉သည် ယုတ်လွန်းနေသလား …တွေးကြည့်
ယုတ္တိဗေဒ အရ ယုံဖို့ခက်တယ်နော…
ခ) အနှီ၉၉ သည် လူလိမ္မာထုံး နှလုံးမူက ဇာတ်လိုက်နှင့် မင်းသား မကွဲပြားသေးတဲ့ ဇာတ်ကို
(ဒါတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့ ….)
ဂ) ကျုပ်တို့ ဉာဏ်မမှီသော အခြားအခြားသော အခြား အရာတွေ ရှိသလား …
(သိပါဝူးဗျာ ဉာဏ်မမှီပါဘူး ..ကြို ၀န်ခံထားမှကိုး…)
သည်တော့ ၅ဂျိန်း ခန်ပနီက …ပလင်န် ကို ချပြ…
စကတ်ဂျူးလ် ကိုပြော …ဘာဟာ ရင်းမယ် ဘယ်ဟာစားမယ်
ဒါဆို အကုန်ရှင်းပြီပဲ …..။
အဲ့လို မရှင်းမရှင်းနဲ့ကတော့ ဘယ်ဘက်ကမှ ၀င်မအော်ချင်ဘူးရယ်….။
ပါ့ဘလစ်ရဲ့ အား … မီဒီယာရဲ့အားကို သုံးပါ …
တခုလေးပဲ …ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ခိုင်မာပါစေ …..
ဖုန်းအကြောင်းတော့ လောလောဆယ် ၀င်မပြောချင်သေးဘူးဗျာ..စိတ်နာနေလို့..
ဟိုတနေ့တုန်းက ရန်ကုန်ကိုဖုန်းခေါ်တယ်။ အဲဒီအိမ်က ဖုန်းမရှိတော့အိမ်နီးနားချင်းကတဆင့် ခေါ်ခိုင်းရတယ်။ခေါ်ပေးတဲ့အိမ်ကလည်း နိုင်ငံခြားဖုန်းဆို၇င် ဈေးကြီးတယ်။ ၅၀၀ကျပ်ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်တခါတခါဆိုရင် နိုင်ငံခြားကလို့မပြောဘူး။ တခါတခါတော့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့မလေးကလို့ပြောလိုက်တယ်။ ဖုန်းလိုင်းတွေကလည်းမကောင်းဘူး။ပြောနေရင်းနဲ့ကျသွားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ပြောတာသူတို့ကြားမှာဘဲလို့ထင်ပြီး ၃မိနစ်လောက်နေတော့ ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြန်ခေါ်တော့ ဖုန်းလက်ခံတဲ့သူက ဘယ်သူလဲဆိုပြီးပြန်မေးတော့ ကိုယ်ကစောစောက ခေါ်ခိုင်းထားတာလေလို့ ပြောတော့ အော်မခေါ်ရသေးဘူး။ နောက်၅မိနစ်လောက်မှ ပြန်ခေါ်ပါဆိုပြီးဖုန်းချသွားတယ်။ ကိုယ်တွေက ၂ခါရှိပြီခေါ်ရတာ။ ပိုက်ဆံက၂ခါကုန်သွားပြီ။ ဒါနဲ့နောက် ၅မိနစ်လောက်နေတော့ ထပ်ခေါ်တော့လည်း မရောက်သေးဘူး။ ပြန်ချထားရပြန်ရော…။ ဒါနဲ့နောက်တခေါက်ခေါ်တော့ ဟိုဘက်ကအစ်ကိုလို့ထင်တဲ့သူက ဖုန်းကိုင်ပါတယ်။ အစ်ကိုနေကောင်းလား။ အေး..နေကောင်းတယ်။ အစ်ကို့အသံကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွ။ ကျနော်ဒီနေ့ အစ်ကိုပို့လိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံရတယ်။ ဟုတ်လား။ ဓါတ်ပုံထဲမှာ အစ်ကိုပုံကနေမကောင်းသလိုဘဲ။ ဒါကြော င့်ကျနော်အစ်ကို့ဆီကိုဖုန်းဆက်တာ ။ဒါနဲ့အစ်မရောနေကောင်း
ရဲ့လား။ ဘယ်ကအစ်မလဲ။ အစ်မမေရီလေ..။ဘယ်ကမမေရီလည်း။ အစ်ကိုမိန်းမလေ..။ငါ့မှာမိန်းမမရှိပါဘူး။ ဟင် ..ဒါဆိုအစ်ကိုက ကိုစိုးမြင့် မဟုတ်ဘူးလား။ ငါစိုးမြင့်ပါ။ဟာ….ဘယ်ကစိုးမြင့်ကိုခေါ်လာတာလဲ။ ခွပ်။(ဖုန်းချတယ်လို့မှတ်)။ ပိုက်ဆံတွေကုန်ပြီးအကျိုးမရှိပါလားနော်။
ဆိုတော့….ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းရဘို့ ၅၀၀၀ကျပ်တန်ဖုန်းကိုရအောင်တောင့်ထားရမှာလား။ အခုချပေးတော့မဲ့၂သိန်းခွဲတန်ဖုန်းကိုဘဲ ၀ယ်ခိုင်းလိုက်ရတော့မှာလား။ ??????